DHAGEYSO: Wado muhiim ah oo la dhagax dhigay,OGOW halka ay ku taallo | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
DHAGEYSO: Wado muhiim ah oo la dhagax dhigay,OGOW halka ay ku taallo
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale iyo xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ayaa maanta dhagax dhigay wadada lagu magacaabo Mariino balse hada loogu magac daray Halyeyga Soomaaliyeed ee Dr. Kadare, taas oo ku taalla Degmooyinka Kaaraan iyo C/casiis.
Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa sheegay wadadan in ay muhiim u tahay shacabka Labada Degmo, iyaguna mar walba ay ku dadaalaan, sidii loo soo celin lahaa bilicdii wadadan.
Waxa uu sheegay in aysan waxba tareyn lacag jeebka lagu shubto, laakiin ay muhiim tahay in la dhiso waxybaaha dhaxal galka u ah bulshada, sida wadooyinka.
Sidoo kale Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa waxa uu sheegay sanadkii hore in ay dhiseen wadooyin bur bursanaa, kuwaas oo shacabka ay dhibaato ku qabeen, isagoo sidoo kale tilmaamay sanadkan cusub qorshohooda in uu yahay in ay dib u dhis ku sameeyaan ilaa 6 wado oo ku yaalla Magaalada Muqdisho.
Todobadkii aynu soo dhaafnay ayay aheyd markii Maamulka Gobolka Banaadir uu dhagax dhigay wadada Via Mosko oo u dhaxeysa Isgoysyada Ceel-gaabta iyo Afisiyooni ee Magaalada Muqdisho, taas oo hada uu socdo howlaha dhisideda.